China lafaoro famonoana ny ozinina Kiln Body sy mpanamboatra | Juda
8. rafitry ny tendrombohitra misy lafaoro
Ny sokay vita dia namakivaky ny vatan'ny lafaoro teo ambanin'ny hetsiky ny hery misintona, ireo poti-javatra kely nianjera mivantana tamin'ny vovoka vovoka, ireo poti-javatra lehibe nijanona teo ivelan'ny tendrombohitra fatana, miaro ny fantsom-pandoroana, miantoka ny famatsiana oksizenina, afaka mifehy avy hatrany ny hafainganan'ny famoahana ny vokatra vita ao anaty lafaoro, ary manampy betsaka amin'ny faritra malama, vokatra be ary may ny solika.
Raha tsy mitovy ny haben'ny vatosokay, lehibe loatra ny fahasamihafana na be loatra ny fahalotoana, novonoina tao anaty lafaoro ny lafaoro, nahatonga ny aretin-drivotra, faritra fanaovana kajy tsy marin-toerana, may be loatra, ka niteraka fivontosana lafaoro lehibe. Raha toa ka tsy maharaka ny fenitra ny sombintsombin'ny arina ary kely loatra ny haben'ny sombintsombiny, dia tsy ampy ny hafanana rehefa rava ny fikajiana ny fatrandrahana CaCO3, izay mora miteraka fametahana. Raha lehibe loatra ny haben'ny sombin-kazo ary mbola mirehitra ihany ny faritra mangatsiaka dia avo loatra ny mari-pana amin'ny famoahana voa, ka mandany solika ary manasarotra ny famoahana lavenona. Raha tsy misy akora manta sy miorina, ny solika, tsy afaka mamokatra vokatra mahay, ka miaraka amin'ny lasantsy mahay no fototra, ampiarahana amin'ny haitao mandroso, hiantohana ny kalitaon'ny vokatra avo lenta.
Fenitra kalitao ho an'ny quicklime:
Ny fenitra ankapobeny amin'ny kalitaon'ny sokay dia: ny atin'ny kalsioma oksida, ny tahan'ny tsy may, ny tahan'ny may be, ny mari-pahaizana ary ny votoatin'ny fananganana manimba sns, saingy ny tena zava-dehibe dia ny indostria samihafa, ny fampiharana isan-karazany dia manana fari-pitsipika samihafa. ny indostria dia manasongadina ny asan'ny lavenona malefaka, ny indostrian'ny vy kosa manasongadina ny tanjaka, noho izany dia ilaina ny mandoro sokay mahery, ny indostrian'ny vy kosa dia manasongadina sokay malefaka .Koa tsy mitovy ihany koa ny fanondroana azy amin'ny ankapobeny. quicklime dia tokony ho mihoatra ny 97%, ny tahan'ny tahan'ny tsy may sy ny tahan'ny may be dia tokony ho latsaky ny 10%, ary ny calcium calcium dia tokony ho mihoatra ny 300mi.
Previous: Juda Kiln – Mpanala lafiny efatra amin'ny lovia boribory
Manaraka: Famolavolana famokarana hydroxide kalsioma Juda (tsy misy rafitra famoahana ny slag) – Tetikasa EPC
7. rafi-pitana Kiln rafitra lehibe: akorandriaka ho an'ny akoran'ny vy, vita amin'ny biriky maharitra. Kiln refactory material dia: sosona biriky marefo Biriky mena Sitraky ny fibre silicate vita amin'ny aluminium dia ahitra 100-300 taonina ny sokay isan'andro. Ny savaivon'ny lafaoro dia 4.5-6.0 metatra, ny savaivony ivelany dia 6.5-8.5 metatra, ny halavan'ny lafaoro dia 28-36 metatra, ary ny haavon'ny fitambarany dia 40-55 metatra. Ny karazana lafaoro amin'ny insulation, insulation multi-layer m ...
Fitaovana famokarana kalsioma Hydroxide, Fitaovana Hydroxide Kalsioma, Manao Hydroxide Kalsioma, Kalsioma oksida sy kalsioma Hydroxide, Anaran'ny varotra calcium oxide, Famoronana Hydroxide Kalsioma,